Waxa aan maanta sameeyey? - 16.06.2018 - 💡💻 Iris - Software for Eye protection, Health and Productivity 🛌👀
Waxa aan maanta sameeyey? – 16.06.2018
Intii aan fikirka ku saabsan sida loo sameeyo Iris more popular fikrad aan maskaxda ku yimid in ay qoraan waxa aan maalin walba sidaa sameeyaan haddii ay jiraan wax ulo aan xusuusan karo wixii aan ku sameeyey.
Oo weliba taasuna waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha waxtar u leh ganacsatada kale.
Waxaan arkay ad qaar on Facebook ku saabsan SEO oo waxaan go'aansaday inaan sameeyo waxyaalo ka mid ah articles lagu taliyey
Isagoo intaa ku daray in Iris Bing maamulayaasha
Waxaan ku daray Iris in Bing oo waa wax aan seegay for ugu dambeeyey 3 sano
Waxaan diiradda kaliya on Google search
Aan aragno sida this soo baxday
Isagoo intaa ku daray in Iris Yandex maamulayaasha
Waxaan sidoo kale ku daray in ay Iris Yandex search engine iyo maamulayaasha
fikrad No haddii qof uu isticmaalaa matoorada search this, laakiin waxaan weli u baahan tahay in ay isku dayaan wax kasta oo
91.5% kama soo dhaafay bogga hore ee natiijooyinka raadinta.
Dhab ahaantii Nice
Tools cilmi keyword
KWFinder, SEMrush, iyo Ahrefs
ha iloobin luqado SEO
Neil Patel, SEO a si fiican u yaqaan, orday tijaabo ah oo uu website by tarjumidda uu blog galay 82 luqadood oo kala duwan. Natiijada? saddex toddobaad gudahood uu ku arkay a 47% kordhiyo guud gaadiidka! Yaa uusan rabin dheeraad ah 47%? Dhab ahaan, marka ay timaado tartanka SERPs, mararka qaarkood socday wadada luqado badan waxay noqon kartaa mid ka mid ah guul ugu dhaqsaha badan ee aad ganacsi.
Waxaan ku daray taageero luqado badan
Waxaa laga yaabaa in this caawin doonaa SEO
Bilaabay in ay auto-turjumi website si Bulgarian
Tarjumay website si Bulgarian
Bedelay CSS ee edit guddi for turjumaadaha
Ka dhigay horyaalka in ay ka hor iyo selectable
tirada domains tilmaamayo gaar ahaa xiriirk ka ugu xoogga badan ee waxbarasho oo dhan
qalab wanaagsan yahay Ahrefs
Todo u baahan tahay si uu u xaliyo Bogani Schema ah
Yoast SEO jeeg
1 in 4 Kooxda martida ka tanaasulaan lahaa website haddii ay qaadato in ka badan 4 seconds inay ku shuban.
46 boqolkiiba dadka isticmaala aadan dib websites liidata fulinta.
Milkiilayaasha Website ay leeyihiin Diintooda 5 seconds si ay u galaan soo booqda ka hor inta aysan ka fiirsan tago.
74 boqolkiiba dadka isticmaala helitaanka goobta mobile ka tagayo haddii ay qaadaneyso in ka badan 5 seconds inay ku shuban.
Kasta oo dib u dhac hal labaad ee waqtiga load page keeni kartaa in $1.6 billion in khasaaraha sannadlaha ah ee baayacmushtariyaasha online sida weyn sida Amazon.
Todo Hagaajinta xawaaraha
Track keyword qiimeynta – AccuRanker talinayo
Daabacaan si Buzzfeed sida channel suuq ah
Sida lagu Helo Your jeex ee Reddit ee 150 Million Shirguddoonka
Quora suuq qoraaga ugu akhri
Mashiinka v3 New faraha aan tus
page New binta la 50% discount by default
arki doonaa sida tani ka soo shaqeeya